Codsiga - Shanghai Huitian Qalabka Cusub Co., Ltd.
Danab hogaamiya NO.1 wadaag suuqa
La shaqeynta Dhamaan 10ka macmiil
Waxaa jira 31% saamiga suuqa ee warshadaha Led ee alaabada Huitian. Waxaan ku siineynaa dheri, dhejis, kuleyl kuleyl iwm dhammaan xalka taxanaha xarkaha laga helo batteriga, hillaaca iyo shaashadda.
Isaga saamiga suuqa ee warshadaha sawir-qaadista ayaa ah kii ugu horreeyay adduunka
Seddexdii module ee sawir qaade ah, waxaa jira mid isticmaalaya alaabada Huitian
Huiten waa aasaasihii ugu horreeyay Shiinaha ee diyaaradeed.
Laga soo bilaabo silica gel ilaa saxanka gadaashiisa, laga bilaabo saxanka gadaashiisa ilaa filimka fluorine, laga bilaabo alaabta ceeriin ee aasaasiga ah si loo sameeyo, huiten wuxuu si buuxda u xaqiiqsaday cilmi baaris madaxbannaan iyo horumarin iyo wax soo saar, maantana wuxuu noqday hogaamiye caalami ah oo ku jira qalabka wax lagu duubo ee sawir-qaadista ah.
NO.1 saamiga suuqa ee warshadaha gawaarida ganacsiga
Waxaa jira 37% saamiga suuqa ee warshadaha gawaarida ganacsiga ee alaabada Huitian. Waxaan horey ulashaqeynay JINLONG, YUTONG, JINLV, ZHONGTONG, HAIGE, FUTIAN, iwm dhamaan 15ka macmiil ee ugu sareysa. Huitian waxay siisaa gawaarida ganacsiga dhammaan xalka taxanaha ah ee xiritaanka illaa isku xirnaanta.
Tayada sare waxay haysaa kalsoonida macaamiisha adduunka oo dhan
Buundada badweynta adduunka ee No.1
HK- Macau - Zhuhai buundada badda
Soo saaraha qalabka isgaarsiinta ee No.1
Soo-saaraha taleefannada casriga ah ee dhammaadka adduunka NO.1
Qalabka dhamaadka Smart wuxuu si dhakhso ah u qaadaa qoto dheer xallinta xalka dhejiska.
Soo saaraha qalabka gaadiidka tareenka ee NO.1 ee adduunka
Huitian wuxuu lahaa heshiis iskaashi istiraatiiji ah oo muddo dheer ah xarkaha tareenka xawaaraha xarkaha iyo tareenka iwm waxay leeyihiin iskaashi guud.
Soo saaraha gawaarida ganacsiga ee No.1
Soo saaraha nambarka koowaad ee adduunka
Huitian horeyba waxay u laheyd taariikh 15 sano warshadaha xabagta elektarooniga ah ， laga helay SGS, UL iwm shahaadooyinka caalamiga ah. Waxaa taageeray tayo sare iyo xirfadle, tiknoolajiyad codsi tayo sare leh oo lagu kalsoonaan karo, waxaan helnay dhammaan macaamiisha kalsooni。
Soo saaraha qaybta No.1 PV ee adduunka
Jinko waa qeybiyaha ugu weyn aduunka ee 'PV module' kaas oo leh 14% saamiga suuqa adduunka iyo awoodda 11.5 GW ee 2018.